के भएको हो किमलाई ? « Globe Nepal
के भएको हो किमलाई ?
प्योङयाङ (एजेन्सी) । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको टाउको पछाडिको ‘बेन्डेजले ढाकेको घाउ’ लाई लिएर अहिले उनको स्वास्थ्यबारे विभिन्न अडकलबाजी हुन थालेका छन् ।
जुलाईको अन्त्यमा सेनाको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा उनको गर्दनमाथि टेप टाँसेको घाउ देखिएको थियो । यसै वर्षको सुरुमा हवात्तै तौल घटेका ३७ वर्षीय किमको स्वास्थ्य बारेमा विभिन्न अनुमान हुँदै आएका छन् ।
किम अस्वभाविक रुपमा दुब्लाएको र यसले सर्वसाधरणलाई दुःखी बनाएको यसै वर्षको जुनमा केही कोरियाली सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । तर, उनको टाउकोमा जुलाई ११ पछि मात्र दाग देखिएको बताइएको छ । सो दिन संगीतकर्मीको एउटा समूहसँग भेट गरेको एनके डेलीले जनाएको छ । तर, त्यो दाग चोटका कारण हो वा उपचारका क्रममा देखिएको घाउ हो भन्ने बारेमा उत्तर कोरियाली नागरिक अन्योलमा छन् ।
किम आफ्नो शरीरमा अनौठा दागसहित सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएको यो नै पहिलो घटना भने होइन । गत वर्षको मे महिनामा उनको एउटा नाडीमा कालो धब्बा देखिएको थियो । मुटुको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा उनको नाडीमा सुई राखिएको हुनसक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले अनुमान गरेका थिए । त्यस बारेमा उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले अहिलेसम्म वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
किमको स्वास्थ्यलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै बारम्बार चासो बढ्ने गरेको छ । त्यस्तै उनको उत्तराधिकारीबारे पनि विश्व समुदायले चासो दिने गरेको पाइन्छ ।
किमका बाबु किम जोङ इल र हजुरबुवा किम इल सोङ दुबै जना मोटा तथा चेन स्मोकर थिए । दुबैको मृत्यु ह्दयघातका कारण भएको थियो । तर, प्योङयाङको सरकारी सञ्चारमाध्यम केसीएनए न्यूज एजेन्सीले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा तस्बिरमा किम पहिले भन्दा तुलनात्मक रुपमा दुब्ला देखिन्छन् । ५ फिट ८ इन्च अग्ला किमको ३ सय ८ पाउन्ड तौल पुगेको थियो । अहिले उनले २२ देखि ४४ पाउन्ड तौल घटनाएको अनुमान गरिएको छ ।
किमको व्यक्तिगत जीवनबारे समाचार बनाउन उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमाथि प्रतिबन्ध छ । उनका हालसम्म कति सन्तान भए भन्ने बारेमा समेत प्योङयाङले गोप्य राखेको छ ।
हालै, केसीटिभीले राजाधानीका केही अज्ञात बासिन्दाको भिडियो प्रसारण गरेको थियो, जहाँ गत महिना किमको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रायः सबै मानिस दुःखी देखिन्छन् । ‘हाम्रा नेता दुब्ला देखिनुहुँदा हामीलाई साह्रै पीडा भइरहेको छ,’ भिडियोमा एक जनाले भनेका छन् ।
विमानस्थलमा उडानसम्बन्धी जानकारी दिने डिस्प्लेमा अश्लील सामग्री
मङ्कीपक्स भाइरसविरुद्ध खोप अभियान संचालन गरिने